१२ औं पटकको फलोअप रिपोर्टिङपछि समातिए श्याम परदेशी, पत्रकारको हातमा हत्कडी ? (भिडियो) - Sidha News
१२ औं पटकको फलोअप रिपोर्टिङपछि समातिए श्याम परदेशी, पत्रकारको हातमा हत्कडी ? (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४२५ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ, भने सम्बन्धित ब्यक्ति विशेषसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।
निम्न विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छः
१. २५ गाँउ ठग्ने श्याम परदेशी पक्राउ
काठमाडौं । सर्वसाधारणलाई ऋण दिएबापत नक्कली कागज बनाएर ठगेको अभियोगमा सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका श्याम परदेशी भनेर चिनिने श्यामकृष्ण साह पक्राउ परेका छन् । परदेशीलाई आइतबार साँझ ८ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको टोलीले पक्राउ गरेको हो । परदेशीको जाली तमसुकको शिकार बनेकी पीडितहरुकोे जाहेरीका आधारमा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो । श्याम परदेशीबाट पीडित भएकाहरु पहिलो पटक हाम्रो कार्यालय आएका थिए ।
२. ठेकेदारको लापरवाहीले चितवनको कालिकामा निर्माण भइरहेका सडक सम्पन्न नहुदै भत्कियो
चितवन । भूकम्प आपतकालीन सहयोग परियोजना अन्तर्गत चितवनको कालिका नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको कालोपत्रे सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुदै भत्कन सुरु गरेको छ । कालिका नगरपालिकाको जुटपानीदेखि शत्तिखोरसम्म निर्माण भइरहेको सडक यति बेला ठाउँ–ठाउँमा भत्कन सुरु गरेको छ । ठेकेदारको चरम लापरवाहीको कारण सडक भत्कन लागेको स्थानीयहरु बताउछन् । सडक मात्रै नभई सडक छेउमा निर्माण गरिएको नालीसमेत यति बेला ठाउँ–ठाउँमा भत्केको छ ।
३. पत्रकार ओम हमाललाई हत्कडी लगाई पक्राउ किन गरियो ?
पोखरा । नेपाल सरकारले प्रेसमाथिको आक्रमण सुुरु गरेको पछिल्ला केही घटनाले पुष्टी गरेको छ । जसमध्ये पछिल्लो समय कास्कीका क्रियाशिल पत्रकार ओम हमाललाई कास्कीको लेखनाथ खुदीबाट केही दिन अगाडि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नेत्रबिक्रम चन्द (बिप्लब) समूहका कास्की र स्याङ्जा जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण वाग्लेसँग अन्र्तवार्ता लिने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको हमालको भनाइ रहेको छ । उनी रिपोर्टिङका लागि सो स्थानमा पुगेको र कुराकानी गर्दागर्दै आफूलाई प्रहरीले पेस्तोल देखाएपछि डरले भाग्दा पक्राउ गरेको पनि हमालले बताएका छन् ।
४. दिल्लीमा ११ वर्षदेखि आफ्नो परिवार खोज्दै एक नेपाली युवक
दिल्ली । एक जना नेपाली बालक, जो ११ वर्षदेखि भारतको नयाँदिल्लीमा रहेको बाल गृहमा बस्न बाध्य भएका छन् । आफ्नो परिवारसँग विछोड भएको ११ बर्ष भयो, उनलाई आफू कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने स्मरण छैन । २००७ मा भारतको त्रिलोकपुरस्थित एक मन्दिरमा भेटिएको अनिलले आफ्नो बुवाको नाम प्रकाश र आमाको नाम मनसरा बताउछन् । खासमा आफ्नो नाम थर के हो उनलाई थाहा छैन । ६ वर्षीय अनिल भारत कसरी पुगे भन्नेबारे भने केही ज्ञान छैन, तर उनी आफू रेलमा चडेर आएको बताउँछन् ।